Bogga ugu weyn » Freebies » Sheeg buuga Kukunka ee Keto Instant Your Buug-yaraha Kushiinka
Iyada oo la adeegsanayo Keto Instant Pot Cookbook, waad heli doontaa
10 Cunto karinta hilibka oo ay kujiraan hilib, hilib lo'aad, steak & salsa, iyo inbadan
Fadlan Ogsoonow: Bixintaani waa mid shaqeyneysa inta alaabtu socoto. Guji hoosta si aad uqabato nuqulkaga hadda inta alaabtu socoto. Waad la yaabi doontaa sida cuntooyinkan degdegga ah ee dheriga keto ay kaaga caawin doonaan inaad gubto dufanka, hagaajiso caafimaadkaaga, iyo inaad kordhiso heerarka tamartaada!
Ma haysatid dheri degdeg ah? Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah kuleylka cadaadiska sare & kuleylka gaabiska ee laga heli karo Amazon